Madaxwaynaha Koonfur galbeed oo shabaab kala wareegay deegaano badan – GEELLE MAG
Madaxwaynaha Koonfur galbeed oo shabaab kala wareegay deegaano badan
Abdiqani Posted On July 6, 2019
Diyaarad uu la socday Madaxweynaha Koonfur Galbeed Lafta gareen ayaa waxay maanta ka degeen Magaalada Xuddur Ee Gobolka Bakool Caasimada U ah.
Madaxweyne Lafta gareen, ayaa sheegay in Maalmaha uu ku sugan yahay Xuddur, inuu wax ka qaban doonaan baahiyaha ka jira Degmada, isla markaana uu Indha-indhayn ku sameyn doono sida ay u socdaan howlaha maamulka iyo Ciidamada.
“Waxaan u nimid inaannu ogaanno howlaha Dowladda ee ka socda degaannada Gobolka , gaar ahaan Degmada xudur iyo inaan dardar gelinno, dhhiirri gelinno , sida shaqada ku socotana ogaanno, oo aynu ka jawaabno baahiyaha Xudur yaalla”, ayuu yiri Madaxweyne ,Lafa gareen.
Waxa uu sidoo kale sheegay Madaxweyne Lafta gareen in ay wax ka qaban doonaan adeegyada Bulshada, gaar ahaan wax barashada iyo caafimaadka, isla markaana ay la kulmi doonaan, maamulka, ciidamada, hay’adaha iyo qeybaha kala duwan ee Bulshada, si guud iyo si gaar ahna ay isu arki doonaan, Ciidamaduna ay ku samayn doonaan dib u dhis iyo tiro koob.
Madaxweynaha ayaa Ciidamada xoogga Dalka Soomaaliya iyo kuwa daraawiishta KG ku ammaanay dagaalka ay kula jiraan Argagixisada, inta uu joogana ay Al-Shabaab ka xoreyn doonaan degaannada ay kaga sugan yihiin Gobolka Bakool.
Xuddur ayaa waxa go’doon geliyey Ururka Al Shabaab,waxaana lasoo sheegayaa in Amaanka Aad loo adkeeyey markii uu maanta tegay Madaxweyne Lafta gareen.
Sawirro:- Ciidanka Amniga Galmudug oo soo bandhigay Haweenay Nin iska dhigi jirtey.